Nkedo ígwè ikuku tọhapụ valvụ - China Tianjin Tanggu TWT valvụ
Nkedo ígwè ikuku tọhapụ valvụ
Iyuzucha usoro bụ ezigbo, nwere ike igbochi omume nke mgbali fluctuations ma ọ bụ ndị ọzọ na-ebibi ebibi. Air nwere ike atara na mmetụta dị aṅaa a mgbe mmiri a jupụtara na mmiri, na ike ga-kpọpụrụ ma ọ bụ na-ezighị ezi mgbali na mmetụta dị aṅaa, dị ka mmiri na kọlụm na nkewa ọnọdụ a ga-akpaghị aka na-meghere, n'ime pipeline iwepụ ọjọọ nsogbu. High ọsọ iyuzucha gas eruba, na ọbụna elu ọsọ airflow weere mmiri alụlụ ga-eme ka iyuzucha mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-...
Iyuzucha usoro bụ ezigbo, nwere ike igbochi omume nke mgbali fluctuations ma ọ bụ ndị ọzọ na-ebibi ebibi.
Air nwere ike atara na mmetụta dị aṅaa a mgbe mmiri a jupụtara na mmiri, na ike ga-kpọpụrụ ma ọ bụ na-ezighị ezi mgbali na mmetụta dị aṅaa, dị ka mmiri na kọlụm na nkewa ọnọdụ a ga-akpaghị aka na-meghere, n'ime pipeline iwepụ ọjọọ nsogbu.
High ọsọ iyuzucha gas eruba, na ọbụna elu ọsọ airflow weere mmiri alụlụ ga-eme ka iyuzucha mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-emechi ụzọ. The ekupụ a na-emechi nanị mgbe ikuku pụchara kpam kpam.
Mgbe ọ bụla oge, ka anya dị ka usoro nrụgide bụ ala karịa ikuku nsogbu, dị ka omume nke mmiri kọlụm nkewa onu, ikuku valvụ ga-ozugbo na-emeghe usoro n'ime ikuku, iji gbochie ntoputa nke na-adịghị mma mgbali na usoro. N'otu oge ahụ, usoro nsị oge na a-adọ ha n'ụzọ nwere ike mee ngwangwa ndị nsị ọnụego.
Iji okpomọkụ: -20 ℃ ~ 120 ℃
ọdabara mgbali: PN1.0 ~ 1.6MPa
ọdabara size: DN25 ~ DN300
Connection ọkọlọtọ: GB · DIN · ISO · Bs
Previous: Air tọhapụ valvụ
Next: Ugboro abụọ orifce ikuku tọhapụ valvụ
Kemeghi Air Control valvụ
Air Compressor Safety valvụ
Air Pressure Relief valvụ
Air Relief valvụ
Automatic Air Hapụ valvụ
Automatic Air valvụ
Automatic Air ekupụ valvụ
Beer Industrial Air Hapụ valvụ
Zipu Iron Air Hapụ valvụ
Mpi nkedo Iron Air Hapụ valvụ
Dn50- Dn300 Air Hapụ valvụ
Ugboro abụọ Orifce Air Hapụ valvụ
Good Quality Air Hapụ valvụ
High Pressure Solenoid Air valvụ
pint-sized Air Hapụ valvụ
Pressure Hapụ valvụ
Ndenye Hapụ valvụ
Hapụ Solenoid valvụ
Sigle Orifce Air Hapụ valvụ
agụụ Air Relea se valvụ
Water Air Hapụ valvụ
Sigle orifce ikuku tọhapụ valvụ
Ugboro abụọ orifce ikuku tọhapụ valvụ